नेपाल इन्सुरेन्सको असार ३ देखि सेयर लिलामी आउंदै, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल इन्सुरेन्सको असार ३ देखि सेयर लिलामी आउंदै, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - असार ३ गतेदेखि नेपाल इन्सुरेन्सले सेयर लिलामीमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समूहको १ लाख ५८ हजार ९४६.८० कित्ता र संस्थापक समूहको २ हजार १७७.३० कित्ता सेयर गरि कुल १ लाख ६१ हजार १२४.१० कित्ता लिलामीमा ल्याउन लागेको हो । सेयरधनीले संस्थापक समूहको सेयरमा न्यूनतम १ हजार कित्ता र सर्वसाधारण समूहमा १०० कित्ता सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूनतम १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको यो लिलामीमा असार १० गतेसम्म भर्न सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले एनआइबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाडौं तथा शाखा कार्यालय लालदरबार काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र विराटनगरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैैंकको सुर्खेत, नेपालगञ्ज, नारायणगढ र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
हाल नेपाल इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी ३० करोड १९ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँ छ । लिलामी सेयर बिक्रीपछि चुक्ता ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २२० रुपैयाँ पुग्नेछ ।